July 11, 2020 - Purakhabar
July 11, 2020 Sunil Khattri
काठमाडौं, २७ असार । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतीय न्यूज च्यानलहरु केवल सञ्चालकहरुले बन्द गरेकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई देश भक्तिपूर्ण कदम भनेको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल सरकारका विरुद्ध तथ्यहीन, भ्रामक र अनर्गल प्रचारको अभियान नै चलाएको बताउनु भएको छ । उहाँले भ्रामक समाचारले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा समेत आँच पु¥याएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मित्र देश चीनसँगको नेपालको सम्बन्धका बारेमा तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनु भएको छ । भारतीय मिडियाहरूको निम्न स्तर वा पीत…
चितवन, २७ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले हतार गरेको भए पार्टी दुर्घटनामा पर्न सक्ने बताउनुभएको छ । चितवन पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले माडीमा शनिबार नेता/कार्यकर्ताहरुसँगको छलफलमा पार्टीभित्रको विवादबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले पार्टी एकता बलियो बनाउन आफू प्रयासरत् रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँ अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको वार्तालाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । छलफलबाटै पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न आफू सक्रिय बनेको उहाँको भनाइ थियो । स्थायी कमिटी बैठक साउन २ गतेसम्म स्थगित भएपछि अध्यक्ष दाहाल चितवन पुग्नुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले…
काठमाडौंमा समुदायमा कोरोना फैलिएको पाइएन, १२ स्थानको परीक्षण नेगेटिभ (भिडियो)
काठमाडौं, २७ असार । इपिमिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौंका १२ वटा छुट्टाछुट्टै स्थानको समुदायमा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ । स्रोत बिना संक्रमित भेटिएका काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण समुदाय मै फैलिएको आंकलन बिज्ञको थियो तर रोग नियन्त्रण महाशाखाले १२ ठाउँबाट संकलन गरेको १२ सय स्वाबमध्ये १ हजार १ सय १६ जनाको रिपोर्ट आइसक्दा सबै नेगेटिभ आएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा तीनकुनेमा कपन, भक्तपुर, खुशिबु, कागेश्वरी, नख्खु, मैतीदेवी, बोडे, कोटेश्वर, ललितपुरको प्यूटार, टोखा, शंखमुलका एक–एक जना संक्रमितको संक्रमण स्रोत खुल्न सकेको थिएन । त्यही स्थानबाट ईडीसीडीले नमूना संकलन गरेर…
काठमाडौं । भरतपुर मेडकल कलेजका तीन डाक्टरसँगै पक्राउ पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अधिकृत तहको कर्मचारी भएको खुलेको छ । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल रहेका छन् । ढकालले उनीहरुलाई कागजी रुपमा सघाएको आरोप छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले प्रशासकीय अधिकृत ढकाललाई सोधपुछका लागि ब्यूरोको टोलीले लगेको बताएको छ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौंबाट आएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्ने डाक्टरहरु राकेश बर्मा, सुप्रभात श्रेष्ठ र बालकृष्ण कालाखेती रहेका छन् । सो अस्पताल चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजको नामले पनि परिचित छ। प्रहरीले…
काठमाडौँ — विदेशबाट यात्रु ल्याएपछि हामी सोल्टी होटलको क्वारेन्टाइनमा बसेका थियौं । पीसीआर गर्दा नौ जनालाई पोजिटिभ देखियो । २३ गते २ बजेतिर हामीलाई एम्बुलेन्समा राखेर बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल लगियो । महिला र पुरुष राख्ने भवन फरक–फरक रहेछ । एम्बुलेन्सबाट परै झारेर कोठामा पठाइयो । तर, कोठा र उपचारका बारेमा जानकारी दिन कोही आएनन् । काठमाडौंको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा संक्रमितका घरबाट पठाइएका सामान जथाभावी फालिएको अवस्थामा र अस्पतालमा पानी तताउनका लागि राखिएको भाँडो जुन कैयन् दिनदेखि सफा गरिएको छैन । कोरोना संक्रमित भएको थाहा पाएदेखि हामी सबै तनावमा…
चितवन, २७ असार । भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकले नेपालमा भारतीय च्यानल बन्द भएको बिषयमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अस्पतालको मेडिसिन विभागमा कार्यरत डाक्टर ऋतुराज तिवारीले नेपालमा भारतीय समाचार च्यानल बन्द भएपछि एक आपत्तिजनक भिडियो रेकर्ड गराएका थिए । उनको अभिव्यक्तिबारे प्रहरीले छानविन थालेको छ । सार्वजनिक उक्त भिडियोमा डा. तिवारीले अश्लील शव्द प्रयोग गर्दै हिन्दी भाषामा भारतले सीमा बन्द गरिदिए ‘ ….खान्छौ नेपाली ? तिमीहरुलाई चीनले ‘ दिन्छ की, जापानले दिन्छ ? भन्दै अश्लील शब्द प्रयोग गरेको पाईएको छ । सरकारी अस्प्तालको चिकित्सकले यसरी दिएको…